समाचार - बिभिन्न कपडाहरू बीचको भिन्नता, एन्टिस्टेटिक कपडाहरू किन पॉलिएस्टर छनौट गर्छन्?
सामान्यतया कपास भनेर चिनिन्छ। फाइबर कपडा र रजाई को लागी प्रयोग गरीन्छ। कपास फाइबरसँग उच्च शक्ति, राम्रो हावाको पारगम्यता, नराम्रो शिकन प्रतिरोध र कमजोर टेन्साइल सम्पत्ति हुन्छ; यो राम्रो गर्मी प्रतिरोध छ, हेम्प पछि दोस्रो; यसमा अम्ल एसिड प्रतिरोध क्षमता छैन, र कोठाको तापक्रममा क्षार पातलो गर्न प्रतिरोधी छ; यसमा र forको लागि राम्रो सम्बन्ध छ, रye्ग गर्न सजिलो, पूर्ण क्रोमाटोग्राम र उज्यालो रंग। कपास प्रकारको कपडाले सूती धागो वा कपास र कपास प्रकारको रासायनिक फाइबर मिश्रित धागाबाट बनेको कपडालाई जनाउँछ।
कपास कपडाको विशेषता:
१. यससँग कडा हाइग्रोस्कोपिकिटी र ठूलो सink्क्रमण छ, लगभग -10-१०%।
२ क्षार र एसिड प्रतिरोध। कपास कपडा अकार्बनिक एसिड को लागी धेरै अस्थिर हुन्छ, एकदम पातलो सल्फ्यूरिक एसिडले यसलाई नष्ट गर्दछ, तर जैविक एसिड कमजोर छ, लगभग विनाशकारी प्रभाव। कपास कपडा अधिक क्षार प्रतिरोधी छ। सामान्यतया, पातलो क्षारले कोठाको तापक्रममा सूती कपडामा कुनै प्रभाव पार्दैन, तर कपासको कपडाको शक्ति कडा क्षारको प्रभाव पछि घट्नेछ। "Mercerized" कपास कपडा २०% कास्टिक सोडा संग सूती कपडा को उपचार द्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ।
Light. प्रकाश प्रतिरोध र गर्मी प्रतिरोध सामान्य छ। सूर्य र वातावरणमा, कपासको कपडा बिस्तारै ऑक्सीकरण हुनेछ, जसले शक्ति कम गर्दछ। कपासको कपडा दीर्घकालीन उच्च तापमान कार्यले क्षतिग्रस्त हुनेछ, तर यसले १२~ ~ १℃० short को छोटो अवधिको उच्च तापमान उपचारको सामना गर्न सक्छ।
Mic. सूक्ष्मजीववादले कपास कपडामा विनाशकारी प्रभाव पार्दछ। यो मोल्ड प्रतिरोधी छैन।
कपास पॉलिएस्टर एक प्रकारको कपडा हो जुन कपास र पॉलिएस्टरको साथ मिश्रित हुन्छ। यसले थोरै बढी कपास समावेश गर्दछ। कपास पॉलिएस्टरको विशेषताहरुमा कपास र पॉलिएस्टरको दुबै फाइदाहरु छन्। के कपास फाइबर कपास र नायलनको मिश्रण हुनेछ? कपास फाइबर एक प्रकारको परिमार्जित polypropylene फाइबर हो। कपास फाइबरको कोर शोषक प्रभावले यसलाई नरम, तातो, सुख्खा, स्वास्थ्यकर र जीवाणुरोधी बनाउँछ। सुपर कपास फाइबर अंडरवियर, बाथरोब, टी-शर्ट र अन्य उत्पादनहरू युटिलिटी मोडलले बनाएको र उत्पादित गर्मी संरक्षण, पानी अवशोषण, नमी प्रवाह, द्रुत सुकाउने, जीवाणुरोधी र अन्य गुणहरूको फाइदाहरू छन्।
स्पानडेक्स पॉलीयुरेथेन फाइबरको संक्षिप्त नाम हो, जुन एक प्रकारको लोचिक फाइबर हो। यो अत्यधिक लोचदार छ र 6-- times पटकसम्म तान्न सक्दछ, तर यो चाँडै तनावको अदृश्यताको साथ आफ्नो प्रारम्भिक अवस्थामा फर्कन सक्दछ। यसको आणविक संरचना एक श्रृ like्खला जस्ता, नरम र एक्स्टेन्सिबल पोलीरेथेन हो, जसले हार्ड चेन खण्डसँग जडान गरेर यसको गुणहरू वृद्धि गर्दछ।
स्पानडेक्ससँग उत्कृष्ट लोच छ। लेटेक फाइबरको भन्दा शक्ति २- times गुणा बढी हुन्छ, रैखिक घनत्व पनि उत्तम छ, र यो रासायनिक गिरावट प्रतिरोधी छ। स्पानडेक्ससँग राम्रो एसिड र क्षार प्रतिरोध, पसिना प्रतिरोध, समुद्री पानी प्रतिरोध, सुख्खा सफाई प्रतिरोध र पोशाक प्रतिरोध क्षमता छ। स्पानडेक्स सामान्यतया एक्लो प्रयोग हुँदैन, तर यसको थोरै मात्रा कपडामा मिसिन्छ। यस प्रकारको फाइबरमा दुबै रबर र फाइबरको गुणहरू हुन्छन्, जसमा प्राय कोर कोर कता धागोमा कोरको रूपमा स्प्यान्डेक्सको साथ प्रयोग हुन्छ। यसमा स्पानडेक्स नग्न रेशम र स्पानडेक्स र अन्य फाइबरहरू बाट बनेको घुमाउने रेशम पनि छ। यो मुख्यतया विभिन्न ताना बुनेको, बुनाले बुनेको कपडा, बुनेको कपडा र लोचदार कपडामा प्रयोग गरिन्छ।
टेरीलीन सिन्थेटिक फाइबरको एक महत्वपूर्ण विविधता हो, जुन पोलीथिन टेरेफाथालेट पॉलिएस्टर फाइबरको ट्रेड नाम पनि हो, जुन मुख्यतया कपडाका लागि प्रयोग गरिन्छ। Dacron, चीन मा सामान्यतया "Dacron" को रूप मा परिचित छ, कपडा कपडा र औद्योगिक उत्पादनहरु को निर्माण मा व्यापक प्रयोग गरीन्छ। पोलिस्टरको उत्कृष्ट ढाँचा छ। फ्ल्याट, फ्लफी वा प्लीटेड पॉलिस्टर यार्न वा कपडा सेट गरिए पछि धेरै पटक प्रयोगमा धोइए पछि लामो समयसम्म रहन सक्छ। पॉलिएस्टर तीनवटा सिंथेटिक फाइबर मध्ये एक हो सरल प्रविधि र सस्तो मूल्यको साथ। थप रूपमा, यससँग बलियो र टिकाऊ, राम्रो लोच, विकृति गर्न सजिलो छैन, जंग-प्रतिरोधी, इन्सुलेशन, कुरकुरा, धोउन र सुक्खा सजिलो छ, आदि, जुन मानिसहरूले प्रेम गर्छन्।
हालको खाद्य उद्योगको लागि, माइक्रोइलेक्ट्रोनिक्स उद्योग, कोइला उद्योग, प्रिन्टिंग उद्योग र यस्तै अन्य, एन्टि-स्टेटिक कपडा उनीहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ, र एन्टि-स्टेटिकमा सक्रिय भूमिका खेल्दछ।
जस्तो कि हामी सबैलाई थाहा छ, एन्टि-स्टेटिक कपडाहरूको कोरको रूपमा: एन्टि-स्टेटिक क्लीन कपडा, यसको चयनले एन्टि-स्टेटिक कपडाको एन्टि-स्टेटिक प्रभावलाई असर गर्दछ। एन्टि-स्टेटिक सुपर क्लिन कपडाहरू मध्ये एकको रूपमा, पॉलिएस्टर कपडा पॉलिएस्टर फिलामेन्टबाट बनेको हुन्छ र त्यसपछि वाहक फाइबरलाई लामो रेखा र अक्षांशमा बुनाईन्छ, जुन विशेष प्रशोधन प्रविधिबाट बनेको हुन्छ। जियाओबियनले तपाईंलाई पोलिस्टर एन्टि-स्टेटिक कपडा छनौट गर्न सिफारिस गर्नुको कारण यो हो कि यसले राम्रो एन्टि-स्टेटिक फंक्शन मात्र राख्दैन, तर यसले कपडा फाइबर वा राम्रो धुलोलाई कपडाको खालीबाट बाहिर पस्नबाट रोक्छ, र यो उच्च विशेषताहरूको छ तापमान प्रतिरोध र धुने प्रतिरोध; यो कक्षा १० देखि ग्रेड १०० को सफा कोठामा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यो व्यापक रूपमा माइक्रोइलेक्ट्रोनिक्स, अप्टोइलेक्ट्रोनिक्स, फाइन इन्स्ट्रुमेन्टहरू र अन्य उद्योगहरूमा प्रयोग गरिन्छ जुन स्थिर बिजुलीबाट प्रभावित हुन्छ र उच्च सफाई आवश्यक पर्दछ।
किनभने पॉलिएस्टर फाइबर आफै नै धेरै लामो छ, त्यसैले ऊन चिप्स उत्पादन गर्न यो सजिलो छैन, र कपडाको घनत्व ठूलो छ, राम्रो धुलो-प्रुफ प्रभावको साथ। फॅब्रिकको इलेक्ट्रोस्टेटिक डिस्चार्ज प्रभाव यो छ कि कपडाको भित्री भाग बराबर दूरीको आचरण तार (कार्बन फाइबर तार) संग इम्बेड गरिएको छ, ०.cm सेमीदेखि ०.२5 सेमी।